5 BUUG EE KORDHIN KARA GARAADKAAGA/CAQLIGAAGA MASKAXEED - Tilmaan Media
Waxaa inta badan dadku ku jiraan karaantiil mudo ka badan ama kudhow sadax bilood, dhibsashada fadhiga aqalada wuu soo battay. Waxaan dhamaanteen la caadifoon karnaa ama la qiiroon karnaa Bill Murray xanuunkii uu ku jilay filimkii caanka ahaa Groundhog Day. Waxaa muuqata in qatartii aqalada laga galay aan weli laga gudbin. Sidaas darteed waxaa loo baahan yahay buugaag iyo sheekooyin nolosha u muhiim ah oo looga gudbi karo kali ahaanshaha iyo ku xirnaashaha aqalada. Aqristow waxaad tahay saxiib qaali ah, Hadaba aan ku siiyo talo ku aadan buugaag iyo sheekooyin ku anfaca.
Waxaa jira buugaag fara badan oo aan lagu dhisin qiyaali, buugtaasi waxay kaa caawin karaan inaad yeelato dabci nololeeed wanaagsan ama in aad ka hesho dhiiri galin si aad uga gudubto caqabado nafsi ah ama kuwo shaqo ee ku heysta. Laakiin, buugta kaa caawin kara in aad fahamto ama aad kordhiso ama maareyso garaadka/caqliga maskaxdaada waa yaryihiin. Marka la eego harsi-hoyaad-la’aanta, buuqa, caajiska, xanaaqa, walalka iyo walbahaarka aan la kulano maalin walba, waxaad xaqiiqsaneysaa in ay laga maarmaan tahay in la kordhiyo qaab fahamka nolosha iyo awooda maskaxeed ee garaadkeena/caqligeena ku wajihi karo caqabadahaas.
Garaadka/Caqli maskaxeedku waa meelaha ugu muhiimsan ee qofku horumarka ka sameyn karo. Waana meelaha qofka bani aadamka ah hadii uu ka sameeyo horumar u keeni kara inuu gaaro isbadal la taaban karo mudo kooban. Hadii aad leedahay awooda aad ku baran karto naftaada, ku xadidi karto caradaada ama farxadaada, ku dhiiri galin karto naftaada marka mooraal kaagu hooseeyo kuna dhisi karto xiriir wanaag bulsho; sifooyinkaasi waxay kaa caawin karaan inaad mar walba gaarto go’aan wanaagsan isla markaasna aad yeelato xiriir bulsho oo caafimaad qaba.
Hadaba si aad u gaarto dhamaan tusmooyinka aan kor kusoo sheegay, waxaan doortay shan buug oo aan is leeyahay way kaa caawin karaan in aad kor u qaado garaadkaaga/caqligaaga maskaxeed adiga oo u isticmaalaaya ka faa iideysigaaga.
1. ‘How to Win Friends and Influence People’ (Saxiibo Kasbo) waxaa qoray Dale Carnegie
Waxaan qirayaa in markii ugu horeysay ee aan maqlay buugan magaciisa in uusan isoo jiidan. Saxiibo Kasbo? Ii yara kaadi, aqristow inta aadan go’aan gaarin buuga aqri. Yeysan ku qabsan sida aniga i qabsatay oo kale.
Sida buuga Think and Grow Rich, waa buug kale oo kalasik ah loogana gol leeyahay in qofku wax ka badalo hab fakar kiisa ama dhaqankiisa. Hadii aad rabtay buug kaa caawiya in aad kor u qaado mooraal kaga, si aad u iib geyso fikradahaga, si aad u kobciso hal abuur kaaga, iyo si aad ugu yeelato sameyn dadka kale; hadii aad doneyso dhamaan intaas aan soo sheegay waxaad timid halkii ku habooneyd. Hadii aad rabto in aad wax ka badasho habka is dhaafsiga ganacsiga, fikradaha ama danta gaarka ah iyo in aad is dhaafsigaas u sameyso si saxan waxaad hesho keyd dahab ah (Xikmado la uruuriyay).
Fikradaha qoraaga Carnegie uu soo bandhigay waxay wax badan ka badaleen habka ganacsiga loo sameeyo ee aan aaminsanaa, habka iib geynta, is dhaafsiga fikradaha, qorsheynta habka lagu gaari karo yoolka iyo tan ugu muhiimsan garaadka/caqliga maskada. Buugaan waxaa inta badan loo asteeyaa in dadka iib geeyayaasha ah aqristaan. Lakin anigu waan ka fikir duwanahay waaanan aaminsanahay in buugaan qeyb ka qaadan karo kordhinta garaadka/caqliga maskaxda qof kasta ee aqriya. Waxaa hubaal ah in buugaani wax badan ka badali doono sida aad u aragto mucaamalada bani aadamka ka dhexeysa.
2. ‘Emotional Intelligence’ waxaa qoray Daniel Goleman
Buugaani wuxuu ka mid yahay buugaagta diirada ku shiday kororka ama kobcinta garaadka/caqliga garasho ee maskaxda. Waxaa hubaal ah in buugaani qeyb weyn ka qaatay cilmi baarisyada ama qoraalada laga sameeyay garaadka/caqliga bani aadamka. Sida qoraga caan ka ah ee Carnegie wuxuu bilaabay 1930 maadkii inuu wax ka qoro. Qaar isaga ka horeeyay oo muwduuca garaadka/caqliga dadka la xariira wax ka qorayna waa jiraan. Lakin Goleman wuxuu soo bandhigay qaab maxali ah oo ku saleysan cilmibaaris qaabka garaadka/caliga bani aadamka u kordhi karo. Sidoo kale buugaani waa buug haldoor ah wuxuuna ku siinayaa sharaxaad ku saabsan aasaaska garaadka/caqliga bani aadamka iyo sida uu u shaqeeyo.
Buugaani wuxu si qaabeysan sharaxaad kaaga siinayaa qeybaha kala duwan ee garaadka/caliga maskaxda bani aadamka. Buugaan wuxu noqday buugta ugu caansan e duniga la qoray 25 sanadood ka hor. Weli wuxuu leeyahay tageero badan dhanka aqristayaasha.
3. ‘Emotional Intelligence for the Modern Leader’ waxaa qoray Christopher D. Connors
Daniel Goleman buugiisa Emotional Intelligence wuxuu kusoo bandhigay garaadka/caqliga maskaxeed dhanka akadamiyada. Emotional Intelligence for the Modern Leader wuxuu isagana ku tusinayaa sida aad uga faa iideysan karto garaadka/caqliga maskaxda. Buugaani wuxuu leeyahay layliyo, qiimeyn iyo cabiro kala duwan oo aad uga faa iideysan karto sida aad wax u rabto ama sida aad rabto inaad u isticmaasho garaadka./caqliga maskaxda.
Tusaalayaasha Hogaamiye yaal caan ah, kuwa aan caan ahayn iyo kuwa kalaba waxaa uu buugaani mar walba tusaale usoo qaadanayaa xaalad ku haboon kaana dhaadhicin karta mowduuca laga hadalyo markaas. Waxaa kaloo buugaani wataa faa iidooyin kale oo badan oo aad ku hor marin karta naftaada. Bugaan waxaa ammaanay sadax qoraa oo ka mid ah qooraayaasha ugu caansan ee buugtooda lagu review gareeyay jariidada New York Times.
4. ‘Dare to Lead’ waxaa qoray Brené Brown
Waxaa lagu yaqaanaa Brené Brown in ay ka hadasho mawaadiicda nugulaanshaha, geesinimada iyo naxariista. Lakin waxay mar mar dhif ah ka hadashaa garaadka/caliga maskaxda. Mararka qaar ay ka hadasho muwduuca la xariira garaadka/caqliga maskaxda waxay aad u isticmaashaa iney ka hadasho awooda bani aadamka iyadoo isticmaaleysa xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo horumarka.
Waxay leedahay qaab gaar ah oo ay usoo gudbiso sheekooyinka ama sharaxaadaha ay bixineyso, qaabkaasi wax gudbinta ah ee ay Brené Brown isticmaasho wuxuu sameynayaa macaan gaar ah. Buugaani wuxuu ku siinayaa jaantus aad si geesinimo leh ugu hogaamin karto ama aad ku qaban karto masuuliyadaha laguu dhiibtay. Buugaani marka aan aqriyay wuxuu i xusuusiyay buug aan aad uga helay oo uu qoray Mike Krzyzewski ee lagu magacaabo “Leading with the Heart”. Kaftanka, naxariista iyo firfircoonida Brené Brown waa mid mudan in la aqriyo.
5. ‘Sacred Hoops’ waxaa qoray Phil Jackson iyo Hugh Delehanty
Hadii aad daawatay filimka taxanaha ah ee The Last Dance, waxaad baratay in yar oo ku saaban safarkii Phil Jackson ee naadigii Kubada Koleyga ee Chicago Bulls. Jakson wuxuu ka mid yahay tababaraasha isboortiska ee tariikhdu xusto. Waa tababare laga baran karo xikmad maskaxeed iyo mid nafsi intaba.
Buugaani wuxuu igu dhiiri galiyay inaan noqdo macalin kubada koleyga, qoraa, khabiir dhanka fagaare ka hadalka. Buugaani wax badan kama quseeyaan Kubada koleyga in kastoo uu qoray macalin kubada koleyga caan ku ah. Buugaani wuxuu wax badan quseeyaa dhanka nolosha ama sida qof kasta noloshiisa u qaabeyn karo. Buugaani wuxuu si dadban uga hadlayaa tariikh nololeedkii maclin Jackson. Sidoo kale wuxuu soo koobayaa dhamaan qibradihii uu helay Jackson intii u macalin ka ahaa iyo xikmadihii nololeeed ee uu ka bartay guusha iyo guuldarada.
Laakin, buugaani dhanka kale marka laga eego wuxuu daaha ka furayaa gudaha maskaxda mid ka mid ah dadkii aduunka ugu khabiirsanaa dhanka tarbiyeynta iyo hogaaminta dadka. Bugaani waa mid si qoto dheer kaaga caawinaya hogaaminta iyo dhisida haykal sareeya ee ku aadan noloshada iyo wixii la xariira.
Buugaani wuxuu qaabeeyay habka aan u wajahaayo nolosha. Buugaani waa buug aan lasoo koobi karin qiimihiisa marka laga fiiriyo dhanka tababarida, wax baradi bani aadaimka, iyo hogaaaminta. Buugaani wuxuu i baray in mar kasta la tijaabiyo oo la marsiiyo imtixaan adag qaacida walba inta aan dadka labarin. In la imtixanao lana marsiiyo waqti si loo ogaado qaacidadu iney wax tari karto dadka iyo in kale.
Qormadaan waxaa qoray
Waa qoraa, Waa Macalin Sports, iyo Qabiir Fagaara ka Hadalka dhanka Garaadka/Caliga.
Waxaa Turjumay Qormadaan
Liban Abdullahi Hussein
Waa Qabiir Dhanka Amaniga iyo Siyaasada Mandiqada Geeska Africa
Duulimaadka Gudaha Soomaaliya oo dhawwaan billaaban doona